Kugadzirira Kuenda Kumba muWheelchair yako Nyowani
Kune avo vachangobva kusangana nenjodzi huru kana yavo vega kuipa izvo zvinoda kuti iwe ushandise a wiricheya, iwe uchafanirwa kugadzirisa dzinoverengeka kumba kwako.
Pane zvinhu zvakasiyana siyana zvaungaite kuti uite imba yako wiricheya kugamuchira. Izvi zvinorega iwe uine rusununguko rwekufambisa pasina kunetsekana kumba kuitira kuti ugare wakasununguka uye unozvimiririra.
wiricheya Platform Inosimudza
Kukwidziridzwa kwepuratifomu inzira huru yekufamba-famba kuburikidza nemitauro yakasiyana siyana pamba usingaise njodzi pautano hwako. wiricheya mapuratifomu epuratifomu akakosha ekuita kuti iwe uwane mukana kune yako vharanda kana yepasi pewe wega. Iwe unogona kunyange kuwana chikuva chinosimudza chemotokari, izvo zvinoita kuti zvive nyore kupinda mukati nekubuda muvhavha wega.
Unogona kuwana zvakasiyana wiricheya mapuratifomu epuratifomu anowanikwa pamusika. Izvo zvinoita kuti zvive nyore chaizvo kuwana mari inosimudzira inozadzisa zvaunoda pamwe nebhajeti rako.
Mukuedza kuita kutenderera pamba pako, zvakapusa, unofanirwa kuona kuti nzira hadzina kumiswa. Kumbira mumwe munhu kuti apfuure nepamba pamwe chete newe kuti uwane mhinduro kwayo yekuronga fanicha. Edza marongero akasiyana siyana kuti uone kuti ndeupi akakodzera iwe.
Chinja Nzvimbo Dzako Dzekuchengetera uye Nzvimbo dzekuchengetedza
Saka iwe unogona kuchengeta imba yako yakarongeka, iwe unofanirwa kugadzirisa ako ekushandira nenzvimbo dzekuchengetedza. Sezvineiwo, dzikisa kukwirisa kwematafura kuti zvive nyore kusvika kwavari kubva pane yako wiricheya. Pamusoro pezvo iwe unogona kuita izvi nechero nzvimbo yekicheni matafura kana matafura ebasa aunoshandisa kazhinji.
Ita shuwa kuti iwe unokwanisa kusvika kune ako makabati nzvimbo pasina kuzviisa panjodzi. Seta zvese zvinhu zvaunogara uchishandisa muchikamu chepamberi. Isa mumadhirowa ekuwedzera kuti akubatsire iwe kusvika kumashure kwezvikamu zvemadhirowa. Pamusoro pezvo iwe unogona kuisa pullout shelving mumakabati ako kuitira kuti iwe ugone kuwana zvinhu zviri kumashure kwazvo.
Kusvikira iwe pakupedzisira wajaira kutenderera mune yako wiricheya, unogona kukurumidza kuguta kana ukarasikirwa nechimwe chinhu nekuti zvichazonyanya kukuomera kutenderera imba yako. Iva nemagwaro ako ekurapa, mishonga yekunyorera pamwe nezvimwe zvinhu zvakanyatsorongedzwa kuti usatambisa nguva yako kana kutsamwa kana uchizvitsvaga.
Iwe unozoda chinguva kuti ujaire kushandisa dzako wiricheya. Zvichakadaro, ita kuti zvinhu zvive nyore kwauri nekugadzirisa yako imba kune yako nyowani kufamba mudziyo. Izvi zvichaita kuti maitiro acho aende zvakanyanya zvinobudirira uye kubvisa kutsamwa kwako.